Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Trailer-ka 'The Darkness' wuxuu u sheegayaa NC-17, Qiso-naxdin folk oo ku saabsan saaxiradda iyo is-beddelka
by Trey Hilburn III June 9, 2021
Muuqaalka ugu horreeya ee loogu talagalay Mugdiga laga bilaabo agaasime Tharun Mohan wuxuu soo bandhigayaa xoogaa argagax dad - taas oo horseed u ah wadooyin qurxoon oo shaydaanku habaaray. Filimku wuxuu umuuqdaa mid iskujira naxdin iyo xoogaa garaacis kacsi leh. Waxaan si dhab ah u xiiseynayaa haddii qiimeynta NC-17 ay sabab u tahay cirridka suurtagalka ah iyo rabshadaha ama haddii ay ka timid dhinaca galmada ee waxyaabaha? Qiyaas waa inaan sugnaa oo aan aragnaa.
Dulucda sheekada Mugdiga waxay u dhacdaa sidan:
Dal dib u gurasho, si ay u qorto sheeko cusub, Lisa waxay dareemeysaa joogitaan kale oo guriga ah. Waxay dareemeysaa inay ruuxiisa la wareegeyso, iyada oo u direysa waddo waali ah. Miyay ogaan kartaa runta ka dambeysa Ruuxa guriga ku jira mise weligeed ayee lumin doontaa?
Hagaag, waa hagaag! Waxaan qodo sheekooyinka dadka badalaya iyo saaxiradyada. Mugdiga waxay umuuqataa inay lahadleyso labadaas, xoogaa Xitaa waxay u muuqataa inay tilmaamayso xaqiiqda ah in dabeecadda ugu weyn ee Lisa ay sifiican u noqon karto isbadal nafteeda.
Mugdiga xiddigaha Amelia Eve (Haunting ee Bly Manor), Cyril Blake (Ciyaarta Sugitaanka, Z-Liiska), Katherine Hartshorne (Maalinta Farxada Leh, Qalalaasaha Ka Dhacay Spectrum), Jo Hart, Adam Bond.
Maxaad u maleyneysaan ragga ku saabsan trailer Mugdiga? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Neil Gaiman wuxuu booqday qaybta Sandman waxaana ka baqay naqshadeynta wax soo saarka. Halkan ka daawo.